Oduu Cabsaa! Waajjirri ABO marti ergamtoota PP’f akka kennamu ajajni darbe. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Cabsaa! Waajjirri ABO marti ergamtoota PP’f akka kennamu ajajni darbe.
ABOn filannoo keessaa dhiibbaa mootummaatiin akka bahe waan ibseef, murni kanaan dura Hiltanitti walgahe ‘ABO’ fakkaatee akka dhiyaatu godhamaa jira. Haala kana aanjessuufis PPn caasaa ishii maraaf dhaamsa dabarsiteetti. Dhaamsi darbes murni Araarsoo Biqilaan durfamu caasaa fi waajjiralee ABO akka dhuunfatan, isaanis deeggarsa akka godhaniif kan ajaju ture. Akka kanaan guyyaa har’aa murni PPn ajajamu Waajjira ABO guddicha dhuunfachuuf fooggalaa jiran.
Gochaan badaa kun garuu murna karaa badii eegale kanaaf umurii isaanii hafte kan gababsu ta’uu, asumaan dhaamuufiin barbaachisaa dha.
OMN: Oduu Ijoo ( Bit 9,2021)
Filannoo Itoophiyaa: ABO’n filannoo biyyaalessaa keessaa bahuu isaa ibse
Addi Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatin hoogganamu filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa jahaffaa keessaa akka bahu murteessuu isaa ifatti labse.
(bbc)—Kana dura dhaabichi waajjiraaleen cufamuu, miseensonni isaa hidhamuu fi dirreen siyaasaa dhiphateera jechuun ”dhiibamaa” jira jedhus filannoo keessaa bahu hin murteessine jedhee ture.
”ABOn filmaata dhufu kana qooda fudhachuu irraa mootummaan dirree siyaasaa itti dhiphiisuun ugguuramuu irraan kan kahe, gochaa mootummaa irraa akka hin hirmaanee taasifamuu isa labsiinaa,” jechuun dhaabichi ibsa baasen beeksisee jira.
Haa ta’u malee, gareen hoggantoota ABO dura taa’aa itti-aanaa dhaabichaa Obbo Araarsoo Biqilaan hogganamuu fi baatii Hagayyaa darbee eegale hayyuu duree waliin waldhabe qabu filannoo kanarratti hirmaachuuf fedhii akka qabu beeksise.
Kana dura dhaabni mormituu biraa keessumaa naannoo Oromiyaatti paartii biyya bulchu morkachuu mala jedhame, KFO’n filannoo keessaa ”dhiibamuu” isaa ibsuun akka hin hirmaanne beeksisee ture.
Paartiin Badhaadhinaa garuu himannaan kuni ”bu’uura hin qabu” jechuun ibse. Paartileen kunneen ”barumaan dhiibameen ba’e jedhanii komachuurra deggertootasaanii kabajanii filannoo taa’uufii qabu” jedhan qondaalli olaanaa dhaabichaa.
Raakkoon jiraachuu akka malu akka amanu BBC’tti kan himan Dubbii Himaan dhaabichaa Dr Biqilaa Hurrisaa ”Garuu filannoo keessaa ba’uuf sababa ta’a jedhee hin amanu. Kan ilaalamuu qabu uummata guddicha” jedhan.
Ibsi ABO maal jedha?
Waggaa lamaa fi ji’a jaha dura akkuma MM Abiy aangootti ol bahaniin biyya ollaa Ertiraarraa qabsoo karaa nagaatti kan deebi’e ABO’n keessumaa dhimma waraanaan mootummaan wal dhabaa ture.
Erga biyyatti deebi’ee as rakkoolee isa mudataa turee fi haala siyaasaa biyyattiin wayita ammaa keessa jirtu kan tarreessu ibsi ABO kun ammattii filannoo gochuun bu’aa hin qabu jedheera.
“Filmaata haqaa fi bilisaa geggeessuu haa turuutii haalli amma biyyittiin keessa jirtu sadarkaa dhumaattiillee mirgi dimokraasii (lowest standards of even illiberal democracies) akkan hin jirreedha” jedha ibsi dhaabichaa.
Filannoon kun filannoo “haqaa, bilisaa fi kan hunda bakka bu’u ta’uu waan hin dandeenyeef bu’aan isaa qaamota dubbiin ilaaluu (stakeholders) biratti fudhatama hin qabu” jedhe.
Filannichi yoo kan gaggeeffamu ta’ellee ‘rakkina siyaasaa gurguddoo ta’an fi waldhibdee biyyattii keessa jiru furuu irratti jijjirama inni fidu hin jiru’ jedheera.
Bu’aan filannoo taasifamu dursee kan beekamedha kan jedhu dhaabichi kanneen hidhaman jedhe akka hiikaman, mariin akka taasifamuufi qaamoleen dimookiraasii cimsuuf gargaaran akka bilisa ta’an wabii kennuun barbaachisa jedhe.
ABOn paartilee waggaa darbe mootummaan sababa weerara koronaavaayirasiin filannoon achi darbe ifatti mormanii ”furmaata siyaasaa” gaafatan keessaas tokkodha.
Mootummaan garuu ”furmaanni siyaasaa gaafatan qoodinsa aangooti” jechuun yeroon turtii mootummaa murtee mana maree federeeshiniin akka dheeratu ta’e.
Miseensonni isaa hidhamuu fi waajjiraaleen isaa waggaa dheeraa booda banaman mootummaatu cufee jechuun dhaabichi himataa ture. Bara ‘chaartaraa fakkaata,’ jechuunis ibsee ture.
Mootummaan garuu himannaa kana hin fudhatu. Ta’us, miseensonni dhaabichaa manni murtii bilisaan gadhiisee poolisiin gadhiisu dhabe ni jijjiru.
Dhimma kana boordiin filannoo biyyaalessaa ‘qaama dhimmicha ilaallatu waliin mari’ataan jira’ jedhee ibsee ture. Ta’us, waan irra gahe ifatti hin ibsine.
‘Nuti filannoorratti hirmaanna’
Ganna waggaa darbee eegalee, keessumaa ifatti, hooganoota ABO gidduu waldhibdeen dhalateera. Kaan isa kaaniin badii adda addaan himataa yoona gaheera.
Walgahii taa’uun kaan isa kaaniin akka haqe ibsanis boordiin filannoo murtee lamaanuu hin fudhanne.
Baatii darbe Boordiin Filannoo Biyyaalessaa gareen hogganoota lamaanii rakkoo gidduu isaanii furuun akka kora taa’aan murteessee ture. Ta’us, kuni ammatti hin taane.
Hayyu dureen dhaabichaa Obbo Daawud filannoorratti akka hin hirmaanne ibsanis, gareen hooggansa Hayyu duree I/aanaa dhaabichaa Obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu garuu akka hirmaatu ibse.
”Filannoo keessaa hin baana hin hirmaannu kan jedhu murtee dabarsine hin qabnu” jedhan itti gaafatamaa qunnamtii uummataa dhaabichaati kan ofiin jedhan Obbo Qajeela Mardaasaa.
Obbo Araarsoo Biqilaafi Obbo Daawud Ibsaa
‘Hayyu duree jechuun dhaaba jechuu miti’ kan jedhan Obbo Qajeelaan, filannoorra hirmaachuuf fedhii qabaannuus hayyu dureen waan irraa barbaadamu gochaa hin jirani jechuun himatu.
”Danqaa guddaa kan nutti ta’e jiru danqaa keessa keenyaati” jechuun qophii filannoo taasisuuf yaalanis rakkachuu ibsu. Yoo hirmaatanis akka paartiitti jechuun BBC’tti ibsan.
Kuni akkamiin ta’a jennee kan gaafanne Obbo Qajeelaan ”kora sabaa goonee hoggana haaraa filachuuf deemaa jirra” jedhan.
Hayyu dureen kora akka waamu dhiibbaa godhaa akka jiranis ibsan.
Yeroo ammaa waajjira muummee dhaabichaa Hayyuu Dureen I/aanaa dhaabichaa Obbo Araarsoo Biqilaa kan keessa jiran yoo ta’u rakkoolee hoogganni Obbo Daawud kaaserrattis gaafanneera.
Waa’ee waajjiraaleen cufamuu ibsamerratti ABO’n mootummaa himate. Akka Obbo Qajeelaatti garuu ‘baay’een isaanii capacity (humna) dhabuudhaan cufamani. Kiraayii kanfaluu dhabuu, rakkoo buclhiinsaan,’ jedhan.
”Rakkoon hin jiru hin jennu rakkoon hin jira. Rakkoon kuni irra hedduun isaanii kan keenya, kan nuti uumne. Dadhabina keenyaan, hooggansa kennuu hanqachuu keenyaan,” jechuun rakkoo ‘qaama biraatti haqachuun furmaata hin fidu’ jechuun himu.
ABOn dhaabota mormituu gurguddoo Itoophiyaa kan filannoo biyyaalessaa marroo jahaaffaa keessaa ifatti bahuu labse isa lammataati.
Paartileen siyaasaa lamaan filannoo keessaa of baasu ibsan kunneen hidhaan miseensota isaanii ‘ilaalcha siyaasaa isaaniin’ akka ta’e ibsu. Poolisii fi mootummaan garuu kana hin fudhatan.
“Namoonni hidhaman hundi miseensa paartii siyaasaa waanan ta’eefan hidhamaa jira yoo jedhan, siyaasa kunuunsuuf jecha seera kabachiisuun hafaa deema jechaadha” jedhu Dr Biqilaan.
Itoophiyaan erga MM Abiy Ahimad aangotti dhufanii filannoo jalqabaa baatii Caamsaa keessa kan taasistu yoo ta’u kanaafis galmeen kaadhimamtootaa taasifamaa jira.
Wal-gahii Naannoo Amaaraatti Abiyyi Ahmadiifi Hoggantoonni Naannichaa geggeessan irratti wal-dhabdeen Abiyyiifi Presidentii Naannoo Amaaraa gidduutti uumamee jira.